Daroka baomba tao Gaza 2008-09 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Aogositra 2019 18:38 GMT
Nanambara fampitsaharana ady samirery tamin'ny 17 Janoary i Isiraely. Nandritra ity ady 22 andro ity, nitatitra ny feon'ireo bilaogera ao Gaza ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices, anisan'izany ireo tantara manokana mikasika ny horohoro sy ny fahafatesana, tamin'ny fotoana nisian'ny fanakanana ny media. Araka ny filazan'ny mpitsabo palestiniana, olona maherin'ny 1.300 no maty tao Gaza, sivily ny atsasak'izany farafahakeliny. Olona 5.000 hafa no naratra. Farafahakeliny Israeliana 14 no maty, isan'izany ny sivily 3.
Araho ireo mpiserasera Twitter manerantany miresaka ara-potoana momba ny zava-mitranga any Gaza amin'ny alalan'ny fanarahana ny tenirohy Gaza (#Gaza)—ary vakio ity lahatsoratra Global Voices ity ho an'ny fanadihadiana momba ny anjara asan'ny Twitter amin'ny fanehoan-kevitra momba an'i Gaza.
-Jereo ireo lahatsary avy ao Gaza ao amin'ny Palestine Vlog, anisan'izany ny iray eto ambany tamin'ny fanafihana 27 Desambra:
-Sabbah Blog manana sesin-tsary misy ireo sary maherin'ny 160 mikasika ny daroka baomba ao Gaza.
-Sary avy amin'i Lubna T ao amin'ny Flickr ahitana sary maromaro avy ao Gaza, ary koa ity andiana diabe ao Ramallah ity mba hanohitra ny daroka an'habakabaka. Ao anatin'izany ity sary eto ambany ity:
Pejy fitantarana manokana teo aloha momba an'i Afovoany Atsinanana ao amin'ny Global Voices: momba ny fifampiraharahana fandriampahalemana 2007 sy ny fifanakalozana gadra eo amin'i Israely sy Libanona Jolay 2008.
-Pejy Wikipedia momba ny daroka baomba ao Gaza 2008 sy ny ady 2008 Israel-Gaza.
-Pejy Krizy Afovoany Atsinanana an'ny BBC
08 Jan – Mampiasa ny ady ao Gaza mba hanaovana famoretna ny governemanta Iraniana
05 Jan – Palestina: “Tsy mitady fanafody aspirina ho an'ny ratra mandeha rà i Gaza”
05 Jan – Manivana vaovao momba an'i Israely sy Palestina ve ny Facebook?
04 Jan – Palestina: “Voafandrika, naratra ara-tsaina ary nampihorohoroana ireo vahoakan'i Gaza”